DIIWAANKA Lockheed P-3C Orion FSX & P3D - Rikoooo
downloads 35 763
Kooxda FS KBT
Updated on 01 / 12 / 2018 : Hada la jaan qaadaya Prepar3D v4 +, Auto-installnooca 10.5.
Updated on 05 / 07 / 2016 : Nooca cusub 3.31 oo la jaan qaada DirectX10 iyo in ka sii badan, Auto-installnooca 10.
Riix halkan si aad u hesho FS2004 kaliya vesion socon.
Waxaan ku faraxsan nahay in aanu soo bandhigno P-3C Oriyon, diyaarad military halyeeyga, qaabeeyey by kooxda FS KBT. The Lockheed P-3 Oriyon waa diyaarad a ilaalada badaha ee ka hawlgala afar helices adduunka. The P-3 Oriyon waa derivative a military ee diyaaradaha rayidka Lockheed L-188 Electra waxaa ka baxay mashruuca. (Source: wikipedia)
Dibadda iyo rinjiyeynta of model this ayaa loo abuuray si faahfaahsan ka badan (V29) shaqo oo hore. Gaar ahaan, la xiriirta ugu weyn ee garabka (sacadda iyo engine Nasser, iwm) waa naqshado cusub. Dhowr nooc oo P-3C loo diyaariyey sidii calaamad P-3C in ay ahayd inta lagu jiro kala-guurka hadda. Waa sagaal nooc ee guud ahaan.
fiican add-on oo leh rooti macmal ah oo buuxa oo 3D ah iyo dhawaaqyo caadooyin ah. Modeling tayo sare leh, soo arag qoraallo badan sida NAVY iyo Ciidanka Cirka Kanada. Qaabka duulimaadka waa mid macquul ah. Intaa waxaa u dheer, diyaaraddan waxaa ka buuxa waxyaabo la yaab leh, sida bambooyinka daadinta iyo howlaha kale ee gaarka ah. Waxay leedahay wax walba oo ah qalabka payware, laakiin waa bilaash.
Author: Kooxda FS KBT